Zonke eNgilani entsha, ngaphandle P. - Thandani Cricket
2 Zonke eNgilani entsha, ngaphandle P.
ipapashwe 4th EyoMdumba 2014 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Test Cricket.
Ezona ndaba zinkulu zeqakamba zangoko i-England ibhengeze uKevin Pieterson ukuba akasekho kwizicwangciso zabo, Ukuchitha ngokupheleleyo i-batsman yabo ekhokelayo. Oku kuye kwandishukumisela ekugqibeleni ukuba ndibhale inqaku lam lokuqala ukusukela oko kwaqala intlekele yomlotha yaqala 2 kwiinyanga ezidlule. Ndiyathanda ukukunikeza isilumkiso esifanelekileyo sokufunda, ukuze ndizame ukuhlala ndiqinisekile malunga nomdlalo omkhulu kukho amaxesha ngamaxesha apho iimfuno zithetha nje zingaziva zithembekile. Le yenye yazo…
Ndinqwenela ukuba ityala kuwe, Ityala elithe kumanqanaba aphezulu ekhilikithi yesiNgesi kuye kwakho uthotho lokungaphumeleli, kwaye ezi ntsilelo zibonakalisa ukuba akukho phawu lokulungiswa. Ndiza kuphinda ndicacisa enye indlela endikhetha yona ngoku.
1. Ukusilela ukulawula i-KP
I-KP ibe ngumdlali weqakamba ophumelele kakhulu eNgilane. Ungumdlali ovuyisa isihlwele. Umntu onokuthi awutshintshe ngokupheleleyo umdlalo nge-bat. Akukhange kubekho uninzi olunjengaye, kwaye awusayi kuba njengaye kwakhona. Nangona kunjalo unemicimbi yakhe, kwaye ezi zifuna ngononophelo, Ulawulo lokucinga nolwayilo. Xa uMichael Vaughan wayengukapteni kwakungekho miba ilandelayo kawonkewonke ne-KP, kwaye xa usiva uMichael Vaughan ethetha nge-KP kulula ukusixela ukuba kutheni. Ngokucacileyo uVaughan ngumntu onobuchule bokuphatha abantu ngezakhono. I-ECB kufuneka iqinisekise, emva kohambo lwe KP lokuqala (xa wayephangwa njengoKapteni), ukuba babenomntu endaweni yokumlawula. Njengoko ndixoxa ngezantsi, Ndingaphambanisa le ngcinga kwaye ndiyakholelwa ukuba isetwork kufuneka ibe "nomphathi" ongumntu olawula iqela, abaqeqeshi, abadlali njl Umntu ofana noMichael Vaughan?
2. Ukusilela ukuphatha amajelo eendaba
Imithombo yeendaba khange ibe nobubele eNgilane mva nje. Nangona kunjalo, uninzi lwezi zinto zibonakala kum ngathi zenziwa eNgilani. Njengeqela babonakale kwihlabathi langaphandle lingaphezulu kakhulu. Ukohlula okanye ukungasebenzi kakuhle kuhlangatyezwa “sazi ngcono ukuba singayilungisa njani” le ndlela yokuzikhusela ngokungeyomfuneko, kwaye uqinisekisiwe ukukhathaza i-pundits. Iipundits ezikhathazayo zisadinga ukuzalisa iikholamu, ezenza ngokufumana ezinye izinto abaza kubhala ngazo, kwaye ezi zihlala zenziwe ngendlela engalunganga xa i-pundit echaphazelekayo ikhethwe kakuhle liqela. Isifundo esisisiseko sokuziphatha kweendaba, kunye nesifo sengqondo, bekufanele ukuba ikwenzile kwacaca ukuba unxibelelwano olululo kunye namajelo eendaba luya kuba licebo elilungileyo- ngakumbi njengoko uninzi lweepundits ezikhokelayo zingabadlali beqakamba abaphambili ngokwabo.
3. Imiceli mngeni yobukapteni
Ukapteni emva kapteni uthatha ubukapteni, kwaye kungaphelanga nonyaka ubona ukwehla kwabo okuphakathi. I-England inembali ende yokuqesha phezulu (kwaye ihlala ivula) amalulwane njengokaputeni, ngubani na ke ezilahlile ifomu, bazibeka bona kunye neqela phantsi koxinzelelo. Kumdlalo wale mihla, kunye neemfuno ezininzi ezivela kubaxhasi, eendaba, njl njl. ukusetyelwa kweqela kufuna ukuphononongwa kwakhona. Ukubeka iimfanelo eziphambili kumdlali kubonakala ngathi akukho ngqiqweni kum. Ngaba unokucinga ukuba umdlali-wekapteni kwiqela lebhola lebhola unenqanaba elifanayo leemfanelo? Ukapteni sele efuna udidi olubanzi lwezakhono- ubuchule njengomdlali weqakamba, ubuchule njengegcisa, kunye nobuchule njengomphathi ongumntu. Ukuphakamisa uxanduva olongezelelweyo kumlawuli uya, okunokwenzeka, kukhokelela ekunciphiseni kwexesha kunye nezixhobo abanazo ngenxa yoxanduva lwabo oluphambili. I-ECB kufuneka inyule Umphathi weqela, oneentlobo ezifanayo zoxanduva njengomphathi webhola. Lo mntu kufanele ukuba abenoxanduva kulo lonke udliwanondlebe, lo gama abadlali kunye nomphathi bejolise ekudlaleni owona mdlalo.
4. Ukulawula inkqubo yoqeqesho
Kubonakala kum ukuba abadlali bobuqu obuhlukeneyo cofa bhetele nabaqeqeshi abohlukeneyo. Abanye (umzk. Alastair Cook) Unokuchuma ngumqeqeshi onobuchule kakhulu kwaye obucayi (umlinganiswa kaGeoff Boycott umzekelo), ngelixa abanye (Pieterson) Ngokucacileyo awuyi kufumana okungcono kolu hlobo lomqeqeshi. Ke umbuzo ocacileyo ngowokuba kutheni kufuneka ube nomqeqeshi omnye wokubetha. Njani ngokuba nomqeqeshi kumdlali ngamnye, okanye umqeqeshi wamaqela abadlali. Impembelelo yokufumana umqeqeshi "olungileyo" iboniswe kakuhle ngenguquko kwimpumelelo kaAndy Murray emva kokuba eqale ukusebenza nomqeqeshi u-Ivan Lendl ekuqaleni kuka-2012.
5. Ukulawula ukhetho lwabadlali
Imeko yeJoe Root yenye ephinde yabonisa indlela ukungagungqi ekucingeni kokuseta eNgilani. Isigqibo sokuqala sokuzisa umntwana omncinci onetalente yayisisigqibo esihle. Ukusukela apho yonke into ihambile kancinci. Ingcambu bekufanele ukuba inikwe unyaka okanye nangaphezulu ukuba i-slot kwiqela ngaphambi kokuba ishukunyiselwe ukuvuleka. Ukumshukumisela ekubeni avule ngokukhawuleza ngaphambi kochungechunge lomlotha, nangona kunjalo ekhaya ecaleni kwe-Australia elihlwempuzekileyo, yayingengongcakazo ongenangqondo, ngakumbi ngodidi olulungileyo lwezinye iinketho ezikhoyo eNgilani zokuvula. Nangona kunjalo, Emva kokwenza isigqibo sokumshiya kwindawo enzulu abakhethi bekufanele ukuba bazimisele ukuzibophelela ekumnikeni ithuba elifanelekileyo lokumnika ixesha lokufumana iinyawo zakhe apho. Endaweni yoko baphulukana nokholo kwaye bamphosa phantsi kumyalelo wokuthumela uhlobo lwemiyalezo exubeneyo edla ngokuba yingozi kubadlali.
6. Ulawulo lwengqondo lomdlali
I-England iqala ukukhulisa imbali yabadlali abaye bazabalaza phantsi koxinzelelo lomdlalo wale mihla. UMarcus Trescothick wayengomnye wamalulwane avulwa kakuhle eNgilane, belahlekile kwangoko kwiqela ngenxa yoxinzelelo. USteve Harmison "khange ahambe kakuhle", kwaye uJonathan Trott ngokucacileyo ukhe wazabalaza kangangexesha elithile. Ndiza kubandakanya uGraeme Swann kolu luhlu, nanjengoko ingumlingisi omnandi kakhulu wase-England ngexesha lonke bendilandela umdlalo, kwaye umhlala-phantsi wakhe wangaphambi kwexesha. Ngandlela ithile bonke aba badlali bade bafikelela kwinqanaba lokuba baziva ukuba kukho into engahambanga kakuhle, nokuba kunye nabo okanye nomdlalo wabo. Kunokutshiwo okufanayo nakumhlala-phantsi ngaphambi kwexesha komhlala-phantsi u-Andrew Strauss. Ngelixa ingeyiyo yonke into enokwenzeka enokulindeleka okanye ilawulwe ngokokude umdlali akwazi ukuhlala eyinxalenye yeqela, Inani labadlali baseNgilani ababandezelekileyo libonakala liphezulu kunamanye amacala ehlabathi. Andililo ingcaphephe kwisayikholojisti, kodwa kubonakala kum ukuba ngaphandle kokuba le yi-spike yezibalo engenakuchazeka kunokubakho into engahambi kakuhle ngokuseta i-England. Impendulo inokulala koochwephesha bengqondo, isenokulala nobungcali obuvela kwamanye amacala ehlabathi, okanye oko mayilale zangaphambili eziluncedo, kodwa i-ECB okungenani kufuneka izame ukufumanisa ukuba yintoni ingxaki, kunye nokuzama ukufunda indlela yokuthintela iingxaki ezifanayo ekuphuhlisweni kwixesha elizayo. Nangona ndingeyiyo ingcali, Ndihlala ndijongana nabantu abakwishumi elivisayo abaphulukene nokuzithemba kumandla abo 'okwazi' okanye balahlekelwe yimvakalelo yendalo, kwaye kusekwe kula mava, Ndicebisa ukuba i-ECB iqale ngokujonga umsebenzi kaCarol Dweck.
7. Ukulawulwa kukhenketho nemidlalo
Le yeyona ndawo apho iNgilani yenze kakuhle kwizizathu kule minyaka idlulileyo. I-England iqhubele phambili indlela yokuba namacala ahlukeneyo e-T20 kunye ne-50-over yeqakamba, kunye nokusebenzisa la macala ukuphuhlisa ulutsha ngenjongo yokuqhubela phambili inkqubela phambili yeqakamba yovavanyo ngokupheleleyo. Lisekhona igumbi elininzi lokuphucula nangona kunjalo. Indlela esavuma ngayo ukubuyela umva eludongeni-luthuthu nothuthu yinto endingasayi kuyiqonda - Ndiyabaqonda ngokupheleleyo abadlali abasendleleni eya eOstreliya becinga ukuba "Asikuko nokuba siliphalaze igazi kunye neenyembezi zokuphumelela le urn? Kutheni kufuneka siyenze kwakhona kwangoko?"Kukho kakhulu 'ezinye iikhilikithi ezidlaliweyo. Ukuba sinendebe yehlabathi eyi-T20, Big Bash, IPL, nabanye, ngaba ngokwenene ufuna ezinye T20 idibanisa zonke ukhenketho siyaqhubeka? Okufanayo kuya kuba kuyi-50-ngaphezulu kweqakamba. Ndiyathanda ukutyelela i-Australia ebusika baseBritane kwiiveki ezi-7 ukuya kwezi-7 - kodwa ukuba bendichitha isiqingatha sonyaka phesheya ngaphandle komfazi wam nabantwana ndicinga ukuba kungekudala ndiza kuziva ndidiniwe, alusizi, kunye nokungathandeki malunga nomdlalo. Ukucutha ukhenketho lwangaphandle ukuya kwi 8 ubuninzi beveki, kunye nokudlala ubuninzi be 2 Uluhlu lovavanyo lokude kude unyaka kusenokubonelela kakhulu ngekhilikithi kwaye kuthetha ukuba abo badlali abangakuthandiyo ukuba kude kangako baya kuhlala benokukhanya "okwaneleyo ekupheleni komjelo" ukuze babe nako ukugxila kumdlalo wabo. Ngapha koko - ukuba singadlala 2 uthotho kude ngonyaka, nathi ukudlala 2 uthotho lwasekhaya ngonyaka. Ngokufanelekileyo ukudlala ikhilikithi eNgilani ukusukela ngoMeyi ukuya kuSeptemba- ngaphezulu kwexesha elaneleyo 8 okanye ngakumbi iimatshisi zovavanyo. Ukudlala ngakumbi kwiimvavanyo zasekhaya ngonyaka kunokuba luncedo kakhulu kwizithili ezityalile imali kwizizathu.
Ingaba ucinga ntoni? Shiya us amazwana ngezantsi! Ukuba ungathanda ukuba uzibophelele nceda sebenzisa i rhuma ikhonkco kwi menu entla kwasekunene. Unga kwakhona ukwabelana oku nabahlobo bakho ngokusebenzisa amakhonkco zentlalo ngezantsi. Masinwabe.
23rd EyoMdumba 2016
siyanikhumbula nonke, ezenza imbali..
12th EyoMdumba 2014
I-KP ibonakala ngathi yenziwe scapegoat, njengoko uAndy Nentyatyambo. Wonke umntu obandakanyeka koluhlu luthuli uya kuba ufuna ukwenza 'ukulunga' - ukubonisa ukuba banokwenza ngcono kunokuba benzile e-Australia- kwaye banokunikwa ithuba lokwenza oko ngaphambi kokuba izigqibo zokhetho zenziwe kuthotho lovavanyo olulandelayo.. Ukufumana unobangela wokungaphumeleli kothuthu kwizenzo zabantu abathile kukuphambuka komzimba kwaye asisiqalo esihle sokwenza i-ECB entsha. Ukuba i-KP okanye omnye umntu ufunyaniswe enetyala lokungaziphathi kakuhle emva koko ukuphanga kunokuba yimpendulo efanelekileyo kodwa akucetywanga.. Ke zithini izizathu zokususwa kwakhe? Ngokucacileyo umba kukuba ebekhethekelele kakhulu 'ngokuziphatha kweqela'. Iya, ke, khange kubekho gumbi kwiqela langoku leBoycott, Lillee, Gayle okanye uWarne. Kungenzeka ukuba bobabini uBammam abayenzi loo nto. Basebenzisa ingcinga engaphakathi. Ukuziphatha kweqela kufuneka kwamkele kwaye kukhulise iimpawu ezizodwa ezahlukeneyo ukuze kungenelwe wonke umntu.
Trent Bridge - A guide emhlabeni Test (868 izimvo)Xa lelokuqala kuthotho "bakhenkethi kwizizathu" thina ihlanganisa Trent Bridge kunye iinkcukacha ubeko emhlabeni kunye neendawo okusemandleni ukuba ahlale Ukuze uqale nge, apha umfanekiso ...
The Bowler ngayo Ukubamba ... ngezikweko sa qhubeka (42 izimvo)Phantse wonke fan leqakamba uya ndikuvile ikhowuti odumileyo, yenziwa Brian Johnston, "Bebambe Bowler ngayo, le Batsman ngayo Willey". Nokuba kukanjani eli ngokwenene kwathiwa ngqo emoyeni kuphinda nemiba enkulu ...
Siyavuyisana Bangladesh njengoko eNgilani Spin ukuba Yoyisa (37 izimvo)Hee Bangladesh ngomhla uvavanyo win kuqala iNgilane. Usindiso basifanele kakuhle kwaye uthotho zazinokuziphelisa lula Wawugqiba 2-0 ukuya iinginginya kunokuba 1-1 zoba. Yomibini imidlalo ibigqwesile ...
Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba? (28 izimvo)Ngelixa bayakrokra ngokwam ngayo ekupheleni komdlalo (ngenxa ekukhanyeni) izolo ebusuku, Kwathi qatha kum - ngebhola ebomvu kunye ibala eliluhlaza, Abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba ...
Trent Bridge - A guide emhlabeni Test (45.1k ukujonga)Xa lelokuqala kuthotho "bakhenkethi kwizizathu" thina ihlanganisa Trent Bridge kunye iinkcukacha ubeko emhlabeni kunye neendawo okusemandleni ukuba ahlale Ukuze uqale nge, apha umfanekiso ...
The Bowler ngayo Ukubamba ... ngezikweko sa qhubeka (19.3k ukujonga)Phantse wonke fan leqakamba uya ndikuvile ikhowuti odumileyo, yenziwa Brian Johnston, "Bebambe Bowler ngayo, le Batsman ngayo Willey". Nokuba kukanjani eli ngokwenene kwathiwa ngqo emoyeni kuphinda nemiba enkulu ...
Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba? (8.3k ukujonga)Ngelixa bayakrokra ngokwam ngayo ekupheleni komdlalo (ngenxa ekukhanyeni) izolo ebusuku, Kwathi qatha kum - ngebhola ebomvu kunye ibala eliluhlaza, Abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba ...